Politika Cookies - My Mili
1. Ny fivarotana dia tsy manangona vaovao, tsy misy fampahalalana misy ao anaty mofomamy.
2. Cookies (antsoina hoe "cookies") dia angon-drakitra IT, indrindra ny raki-daza, izay voatahiry ao amin'ny fitaovana faran'ny fivarotana Store sy natao hampiasana ny tranokalan'ny Store. Matetika ny Cookies dia misy ny anaran'ilay tranokala niaviany, ny fitahirizan-dry zareo amin'ny fitaovana famaranana ary ny isa tsy manam-paharoa.
3. Ny orinasa mametraka mofomamy amin'ny fitaovana faran'ny mpampiasa ny Store sy ny fidirana amin'izy ireo dia ny mpandraharaha Store.
4. Ampiasaina ny Cookie: o mampifanaraka ny votoatin'ny tranokalan'ny Store amin'ny alàlan'ny safidin'ny mpampiasa ary manatsara ny fampiasana tranonkala. Ho an'ny tsirairay, ireo rakitra ireo dia ahafahan'ny manaiky ny fitaovan'ny mpivarotra Store ary aseho amin'ny fomba tsara ny tranokala, mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay; o famoronana antontan'isa manampy amin'ny fahalalana ny fomba fampiasan'ny mpampiasa ny tranonkala, izay ahafahana manatsara ny firafitr'izy ireo sy ny atiny;
5. Mampiasa karazana mofomamy roa lehibe ireto mpivarotra: «session» cookies ary «cookies» maharitra. Ny cookies session dia rakitra vonjimaika napetraka ao amin'ny fitaovana faran'ny mpampiasa mandra-pialany amin'ny tranokala na mamadika ny rindrambaiko (web browser). Ny mofomamy maharitra maharitra dia voatahiry ao amin'ny fitaovana faran'ny mpampiasa mandritra ny fotoana voatondro ao amin'ny mari-pahaizana mofomamy na mandra-pahalan'ny mpampiasa azy.
6. Mampiasa ireo mofomamy manaraka ireto ny fivarotana: "ilaina" cookies, ahafahana mampiasa serivisy misy ao anatin ny fivarotana, e.g. cookies fanamarinana nampiasaina ho an'ny serivisy izay mitaky fanamarinana ao anaty Fivarotana; mofomamy nampiasaina hiantohana ny filaminana, ohatra nampiasaina hamantarana ny hosoka eo amin'ny sehatry ny fanamarinana ao anaty Fivarotana; Cookies "Performance", ahafahana manangona ny fampahalalana momba ny fampiasana ny tranokalan'ny Store; Cookies "Functional", mamela "mahatadidy" ireo napetraka nofidin'ny mpampiasa sy nampidirina manokana ny fifandraisana an'ny mpampiasa, ohatra ny momba ny fiteny na faritra niavian'ny mpampiasa, ny haben'ny endri-tsoratra, ny fisehoan'ny tranokala, sns.; Cookie "dokambarotra", manome alalana ny mpampiasa manome votoaty dokam-barotra mifanaraka amin'ny tombontsoany.
7. Amin'ny tranga maro, ny rindrambaiko ampiasaina amin'ny fitadiavana tranokala (navigateur web) amin'ny alàlan'ny default dia mamela ny fitahirizana mofomamy amin'ny fitaovana faran'ny mpampiasa. Ireo mpampiasa mpivarotra dia afaka manova ny làlan-dry cookie amin'ny fotoana rehetra. Ireo toe-javatra ireo dia azo ovaina indrindra amin'ny fomba toy ny fanakanana ny fikarakarana mofomamy tsy misy fahazoan-dàlana amin'ny fikandrana an-tranonkala na fampahafantarana momba azy ireo isaky ny apetraka ao amin'ny fitaovan'ny Store User. Ny fampahalalana amin'ny antsipirihany momba ny mety sy ny fomba fitantanana ny mofomamy dia azo alaina ao amin'ny laminasa rindrambaiko (navigateur web).
8. Mampahafantatra ny mpandraharaha ny magazay fa ny fameperana amin'ny fampiasana cookies dia misy fiantraikany amin'ny sasany amin'ireo fiasa ao amin'ny tranokalan'ny Store.
9. Mofomamy napetraka amin'ny fitaovana entin'ny fivarotana Store dia mety ampiasain'ny mpanao dokambarotra sy mpiara-miasa miara-miasa amin'ny mpandraharaha Store.
10. Misy fampahalalana bebe kokoa momba ny mofomamy hita ao amin'ny www.wszystkoociasteczkach.pl na amin'ny fizarana "fanampiana" ao amin'ny menio fampielezana an-tranonkala.